DAREEN 5aad: Abaarta SIMA iyo Saamaynteeda – Radio Daljir
DAREEN 5aad: Abaarta SIMA iyo Saamaynteeda
Maajo 2, 2017 12:51 b 1
Dhegaystayaal taxanaha barnaamijka DAREEN oo todobaad walba Axadda iyo Jimcaha aad ka dhegaysataan FM-yada Radio Daljir iyo internetka ciwaanka aan ku leenahay ee daljir.com qaybtiisa 5aad maanta waxaan kusoo qaadanaynaa:
1. Haween is abaabuley oo magaaladda Caabudwaaq ka bilaabay olole ay gurmad ugu fidinayaan dadka ku caydhoobey abaaraha dalka ka jira. Haweenkan ayaa wajiga koowaad ee ololahooda raashin ku gaadhsiiyey 200 oo qoys oo danyar ah.
2. Xubinta falaanqaynta oo uu marti ku yahay Prof Xareed oo bare jaamacadeed ka ah magaaladda Boosaaso waxaan ku gorfaynaynaa sida ugu haboon ee looga faa’iidaysan karo biyaha roobabka gu’ga ee hadda ka bilowday inta badan dalka.
3. Xubinta aragtida dhegaystayaashana waxaan ku eegaynaa isbarbardhiga deeqda gurmadka abaaraha ee dadka Soomaaliyeed iyo midda beesha caalamka, waxaana qaar kamid ah dhegaystayaasheenu aaminsan yihiin in beesha caalamku aad uga gaabisay gurmadka abaaraha.
Maqaalo Kale 376 Wararka 23007
ARDAA: Xalqadii 26aad ee Taxanayaasha ARDAA
Madaxweyne Kuxigeen Camay iyo Soodhaweyntii Buuhoodle (Daawo)
c/naasir 4 years ago
abaartani maahan mid dad wax ka qaban karan gacan aadamana ma baahi tiri karto allah roob noo keeno